MA Lock - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီလ 26, 2018
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ MA Lock
When timeframe changes, this indicator automatically adjusts its setting to new timeframe if possible. The idea is “I just want to see how MA(8) from H1 when I am currently on M15” သို့မဟုတ် “I just want to see how MA(100) from M15 when I am currently on H4” .
MA Lock isaMetatrader4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Copy MA Lock.mq4 to your Metatrader Directory / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
How to remove MA Lock.mq4 from your Metatrader4ဇယား?
Next ကိုဆောင်းပါးAlpha Trend Spotter PA Free
လူငယ်များသို့ Indicator ညှစ်
willie meyer သြဂုတ် 18, 2016 တွင် 10:31 pm